သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
Dotec Needle Co., Ltd. ပေးဝေနေနှင့် Exporting, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြု စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်နဖားကိုရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ဒါဟာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုညောနှင့်အတူအချိန်မှာသူတို့ကိုကယ်မနှုတ်ကျွန်တော်တို့၏အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုအကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးထုတ်ကုန်များကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏နေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
DVX1，DVX57，DVX59， : စက်မှုအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်
size: 09/65 ~ 22/140
Equivalent Systems: UY121GS, UYX121, 62X21, MY1001, SY3510, 759; 1628
machine: ဇစ် Chainstitch စက်
အဆိုပါဝိသေသနှစ်ဆ groove ရှိပါတယ်နှင့်မျှမတို့ပဝါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။4အမျိုးအစားများ R ကို, Kn, BP ရေနံကုမ္ပဏီကနှင့် Suk နှင့်အတူထောက်ပြပါတယ်။
ဒါဟာနှစ်ခုအပ်နဖားကိုစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်, knitted ကောင်းကျိုးအတွက် InterlockProtocol ကိုချုပ်များအတွက်သင့်လျော့်ဖြစ်ပါတယ်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: UY121GS, UYX121, 62X21, MY1001, SY3510, 759; 1628 ။
size: 11/75 ~ 23/160
Equivalent Systems: 62X57, 5640; SY3260
machine: နှစ်ချက် Chainstitch စက်
အဆိုပါဝိသေသကဝက်အူ groove နှင့်စံပဝါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။4အမျိုးအစားများ R ကို, Kn, BP ရေနံကုမ္ပဏီကနှင့် Suk နှင့်အတူထောက်ပြပါတယ်။
ဒါဟာစက်နှင့်နှစ်ဆသောစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်း edging ကျော်အတွက်သာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ elastic လေးလံသည့်ပစ္စည်းများအပေါ် edging ကျော်သီချုပ်များအတွက်သင့်လျော့်ဖြစ်ပါတယ်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 62X57, 5640; SY3260 ။
Point: R ကို
Equivalent Systems: 62X59, SY4112
အဆိုပါဝိသေသကပတ်ပတ်လည်မှတ်နှင့် rotate ညာဘက်နှင့်အတူဝက်အူ groove ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်သောအပ်နဖားကိုအရွယ်အစားသာ 19/120 ။
ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ knitwear သီချုပ်အဘို့အသင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 62X59, SY4112 ။
LWX2T/LWX6T，LWX1T，LWX3T/LWX4T，LWX5T，LWX25 IEU : ကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
Equivalent Systems: 135X9 MR
machine: Quilting အပ်ချုပ်စ​​က်
အပ်နဖားကိုတွဲ: Quilting အပ်နဖားကို
အဆိုပါဝိသေသ: အဆိုပါအပ်နဖားကိုပွိုင့်သာပုံမှန်လှည့်လည်ပွိုင့်ဖြစ်သည့် R ကိုအမှတ်နှင့်တကွ, အပ်နဖားကိုအမှတ်ဘုံအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများနှင့်သိုးမွှေးထိုးသည့်ပစ္စည်းများသင့်လျော်သည်။ ဒါဟာဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္အပ်ချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဖြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်, စံပဝါ, တစ်ဦးချင်းစီချုပ်၏အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်ဘက်မှာ groove မျက်နှာနှင့်မျက်စိ၏အလယ်လောက်စတင်လှည့်လည် Shanks နဲ့ဆေးထိုးအပ်နှင့်အတူဆေးထိုးအပ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 135X9 MR ။ ကျနော်တို့ဈေးကွက်တွင်တင်းကျပ်တဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ .Good ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။
TVX1，TVX5，TVX7，TVX64， : စက်မှုစက်အပ်နဖားကို
Point: R / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက
size: 09/65 ~ 18/110
Equivalent Systems: 149X1, SY2774
အဆိုပါဝိသေသ: ပတ်ပတ်လည်အမှတ်အဖြစ်သုံးခုအပ်နဖားကိုပွိုင့် options တွေကိုအပိုဆောင်းအလင်းဘောလုံးကိုမှတ်နှင့်ဘောလုံးကိုပွိုင့်။ ဒါဟာပဝါမပါဘဲ groove လိမ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာနှစ်ချက် Chain ချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာဆလင်ဒါပြွန်, hemming နှင့်ခုတ်လှဲချုပ်ရိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသို့ဇစ်ကိုဖုံးအုပ်ဘို့အသင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 149X1, SY2774 ။
Equivalent Systems: 149X5, 62X45, 62X53, SY4151, SY4107
အဆိုပါဝိသေသ: ဒါဟာ groove နှင့်စံပဝါလိမ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာ Horizo​​ntal LOOPER နှစ်ချက်စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာ waistbands ပူးတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဆင်မြန်းချုပ်အဘို့အသင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 149X5, 62X45, 62X53, SY4151, SY4107 ။
Size: 08/60 ~ 22/140
Equivalent Systems: 149X7, 149X25, MY1002A, TVX25, SY2793, SY2776
ဒါဟာ bedclothes နှင့်သားရေကျီ, ကျီအောက်မှာအဝတ်ပေါ်မှာချုပ်ရိုး abutting အပ်ချုပ်အဘို့အသင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 149X7, 149X25, MY1002A, TVX25, SY2793, SY2776 ။
Point: R / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / Suk / spî
size: 10/70 ~ 21/130
Equivalent Systems: B64, SY7045, UY192GBS
ထိုသို့သောဂျင်း, အနွေးထည်နှင့်ချွန်ထက်အဖြစ်လေးလံသောအလေးချိန်ပစ္စည်းများ, သင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: B64, SY7045, UY192GBS ။
UOX113GS，UOX163GAS : စက်မှုအပ်
Equivalent Systems: UY113GS, SY7090
အဆိုပါဝိသေသ: ဒါဟာ groove နှင့်စံ scarf.It လိမ်ခဲ့သည်ပေါင်းစုံအပ်နဖားကိုဆလင်ဒါအိပ်ရာကို double စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
Size ကို 11 မှ 14: ဒါဟာအထည်, elastic waistbands ပစ္စည်းများ, ရှပ်အင်္ကျီအဖွင့်ပစ္စည်းကိုချုပ်ရိုးခေါက်ဘို့အချုပ်များအတွက်သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အရွယ်အစား: 11-18 ပူးတွဲပြီး elastic waistbands ချုပ်များအတွက်သင့်လျော်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: UY113GS, SY7090 ။
size: 09/65 ~ 16/100 ခန့်
Equivalent Systems: UY163GAS, UY8021GS, SY7185, MY1242
အဆိုပါဝိသေသ: အဆိုပါ groove ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်စံပဝါမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာတစ်ခုတည်းသော / ကို double -needle ဆလင်ဒါ scallop-shaped အပ်နဖားကိုစက်အသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာ zigzag အပ်ချုပ်သည်, သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများ scallop ချုပ်၏သိုးမွှေးထိုးအတွင်းခံ၏လည်ပတ်တွေနဲ့အနားအပေါ်ချည်နှောင် performance ကိုသင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: UY163GAS, UY8021GS, SY7185, MY1242 ။
UY180GVS : စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်
Size: 14/90 ~ 22/140
Equivalent Systems: UY180L, UYX180GVS
machine: Cylinder စက်
အဆိုပါဝိသေသ: Round ပွိုင့်ခြင်း, groove ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်စံပဝါမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာအပ်ချုပ်ဝတ်စုံ, ဂျင်း, အလုပ်လုပ်နေရသောဆင်မြန်းသင့်လျော်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: UY180L, UYX180GVS ။
292B : အကောင်းဆုံးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
Size: 12/80 ~ 16/100 ခန့်
Equivalent Systems: 176X3, SY1011
အဆိုပါဝိသေသ: လင်းမ်အစုံပွိုင့်ခြင်း, groove လက်ဝဲဘက်ခြမ်းနှင့်မျှမတို့ပဝါမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 176X3, SY1011 ။
8158 : စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်
Equivalent Systems: 8185
machine: Net ကအပ်ချုပ်စ​​က်
ဒါဟာ Net ကအပ်ချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 8185
MERROW10S : အိမ်တွင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို
Equivalent Systems: MERROW10S
အဆိုပါဝိသေသ: Round ပွိုင့်ခြင်း, groove ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်စံ scarf.Available အပ်နဖားကိုအရွယ်အစားမှာရန်ဖြစ်ပါသည်: 25 / 200.Round ပွိုင့်ဘုံအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများနှင့်သိုးမွှေးထိုးသည့်ပစ္စည်းများချုပ်ကောင်းမွန်သည်။
HAX1 : စက်မှုအပ်ချုပ်စ​​က်အပိုပစ္စည်း
size: 9/65 ~ 18/110
Equivalent Systems: 15X1 / 705H, 130 / 705H, 705H, 15X1H, 130R, 2020
အဆိုပါဝိသေသ: တစ်ဖက် Shanks ပြားနှင့်လက်ဝဲ groove မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဖြောင့်စက်ချုပ်နှင့် zigzag အပ်ချုပ်များအတွက်သင့်လျော်သည်
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 15X1 / 705H, 130 / 705H, 705H, 15X1H, 130R, 2020 ။
PVX7 : ကူးသန်းရောင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို
size: 14/90, 16/100
Equivalent Systems: 52X7, SY1610
အဆိုပါဝိသေသ: Round ပွိုင့်။ လက်ဝဲဝက်အူလှည့် groove ။ စံပဝါ။ နှစ်ဦးကိုအရွယ်အစားရရှိနိုင်ပါသည်: 14/90, 16/100 စက်မှုဇုန်အထည်ချုပ်စ​​က် use.Equivalent စနစ်များပါဝင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်: 52X7, SY1610 ။
PYA-4 : စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်
size: 02/105 ~ 08/200
Equivalent Systems: Pya-4
machine: သွေးထွက်သံယိုမှုများဖြင့်စက် Dial
အဆိုပါဝိသေသ: ရှည်လျား groove, ကြားဖူးတယ်ပတ်ပတ်လည်ပွိုင့်နှင့်အတူအဆိုပါအပ်နဖားကို။
ဒါဟာလှည့်လည်စည်းလုံးစက်အဘို့ဖြစ်၏နှင့် machine အသုံးပြုရန်အချိန်အဆက်လုပ်တဲ့ Dial ။
ဒါဟာပိုက်ဆံအိတ်အနွေးထည် (သိုးမွေးထည်များအတွက် InterlockProtocol ကိုချုပ်) အတွက်ကောင်းပါတယ်။
PYSX1 ER : စက်ကို အပ်နဖားကို
Equivalent Systems: 1826
အဆိုပါဝိသေသ: ကြားဖူးတယ်ပတ်ပတ်လည်အမှတ်ပုံဖော်နှင့်တစ်ဘက်ခြမ်းမှမှာ 180 °ပြားကွေး။ ရရှိနိုင်သောအပ်နဖားကိုအရွယ်အစား 21/130 ။
1826: ဒါဟာစနစ်များထည့်သွင်း stitching.Equivalent ခြေအိတ်ကြောင့်သင့်လျော်သော, Skip ချုပ် function ကို minimize ကိုဆောင် ခဲ့. ပုံဖော် use.Curved စက် Link ချိတ်နေထိုင်ကြတဲ့ Dial အတွက်သာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။
SGX1906，SGX1963，SGX1965 : စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်
size: 09/65 ~ 14/90
Equivalent Systems: SY1906, 135X53
machine: ZigZag ချုပ်စ​​က်
အဆိုပါဝိသေသ: Round ပွိုင့်, ဘယ်ဖက် groove နှင့်စံပဝါမှာဖြစ်ပါတယ်။ Zigzag စက် use.It အပ်ချုပ် brassiere (bra) အတွက်အဓိကအားဖြင့်သည် ဖြစ်. ဖြစ်သည်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: SY1906, 135X53 ။
Point: Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက
Equivalent Systems: SY1963
အဆိုပါဝိသေသ: နှစ်ဦးအပ်နဖားကိုအချက်များကိုများကိုရွေးချယ်ခြင်း, ဘောလုံးကိုမှတ်နှင့်အပိုအလင်းဘောလုံးကိုပွိုင့်တော့ဘူး, ထို groove ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်စံပဝါမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာ Zigzag ချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: SY1963 ။
Equivalent Systems: SY1965
အဆိုပါဝိသေသ: အလတ်စားဘောလုံးကိုပွိုင့်ခြင်း, groove ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်စံပဝါမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ အပ်ချုပ်ပညာအလတ်စားသည့်ပစ္စည်းများ knitting စဉ်းစားရန်အဘို့အ Zigzag ချုပ်စ​​က် use.It သည်ကောင်းသောအဘို့, အတွင်းခံအဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: SY1965
DYX3，DYX3 FR : အပ်ချည်အပ်ချုပ်စ​​က်အပ်
size: 23/160 ~ 27/250
Equivalent Systems: 7X3, 7X1, 794 (H), 793; SY5213, SY5211, DYX1
အဆိုပါဝိသေသကပတ်ပတ်လည်ပွိုင့်ရှိပြီးလက်ဝဲ groove မှာရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာရဲ့ cylindrical အိပ်ရာထိပ်ဖျားနဲ့ခလုတ်ကို feed ကို lockstitch စက်အသုံးပြုဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ထိုင်ခုံ (ဘေးကင်းလုံခြုံရေး) ခါးပတ်, တဲကုလားထိုင်ကူရှင်တွေ, ရှူးဖိနပ်, အဝတ်သေတ္တာ, etc, အောက်ခြေလက်အိတ်, ခရီးဆောင် handle ကိုသီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်သည်
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 7X3, 7X1, 794 (H), 793 SY5213, SY5211, DYX1 ။
Equivalent Systems: 794 (H) FR, စာတမ်းဖတ်ပွဲ 2000
အဆိုပါဝိသေသ: Round မှတ်နှင့်လက်ဝဲ groove မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်သောအပ်နဖားကိုအရွယ်အစားကသာ 24/180 ။
ဒါဟာရဲ့ cylindrical စက်အသုံးပြုဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 794 (H) FR, စာတမ်းဖတ်ပွဲ 2000 ခုနှစ်။
SMX1014B : အရည်အသွေးပြည့်မီအပ်နဖားကို
Equivalent Systems: MY1014B, SY7256
အဆိုပါဝိသေသ: 4-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်နှင့် 6-ဟာ Thread ။ ဒါဟာနှစ်ဦး groove နှင့်စံပဝါရှိပါတယ်။
ဒါဟာအပ်ချုပ်သည် T-ရှပ်အင်္ကျီ, အဖုံးချုပ်အားကစားနှင့် knitwear ကောင်းမွန်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: MY101B, SY7256 ။
SPE193 : စက်မှုအပ်ချုပ်အပ်
Equivalent Systems: SPE193
အဆိုပါဝိသေသ: Round ပွိုင့်။ အဆိုပါ groove ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်စံ scarf.Available အပ်နဖားကိုအရွယ်အစားမှာရန်ဖြစ်ပါသည်: 23/160 ။
DCX27 : အပ်ချုပ်စ​​က်အပ်
Point: R / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / Suk / SKF / spî
Size: 07/55 ~ 22/140
Equivalent Systems: B27, 191GS, 81X5, 82X1, SY6120, MY1023, 1886
machine: High Speed​​ Overlock စက်
အဆိုပါဝိသေသနှစ်ခု groove မှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသော့ခတ်စက်အသုံးပြုခြင်းကျော်မြန်နှုန်းမြင့်အဘို့ဖြစ်၏။ အဓိကအားဖြင့်အဝတ်ကိုနယ်စပ်သီချုပ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: B27, 191GS, 81X5, 82X1, SY6120, MY1023, 1886 ။
DHX1 : အပ်ချုပ်စ​​က်အပိုပစ္စည်း
Equivalent Systems: 24X1, SY1111
machine: Unbrella စက်
အဆိုပါဝိသေသပတ်ပတ်လည်ပွိုင့်နှင့်အတူအပ်နဖားကိုအဓိကအားချည်မျှင်နှင့်အထည်များတွင်အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထီးစက်အသုံးပြုဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာထီးကိုကောက်ရိုးဦးထုပ်ချုပ်ကောင်းမွန်သည်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 24X1, SY1111 ။
DMX3，DMX13 : စက်မှုခွန်အားအပ်နဖားကို
size: 11/75, 12/80
Equivalent Systems: 82X3, SY1242
machine: နှစ်ချက် Chain ချုပ်စ​​က်
အဆိုပါဝိသေသပတ်ပတ်လည်မှတ်နှင့် groove Shanks နှင့်အတူဆေးထိုးအပ်သည်။
ဒါဟာနှစ်ချက် Chain ချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 82X3, SY1242 ။
size: 09/65 ~ 21/130
Equivalent Systems: 82X13, 1886KK, SY1246
အဆိုပါဝိသေသနှစ်ဆ groove ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။4အမျိုးအစားများ R ကို, Kn, BP ရေနံကုမ္ပဏီက, Suk နှင့်အတူထောက်ပြပါတယ်။
ဒါဟာကို double / အမွှာအပ်ချည်စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာထွက်သွားပြီး polyester အပ်ချည်, ဝါဂွမ်းချည်မျှင်နှင့် knitted လက်အိတ်ပေါ်မှာချုပ်များအတွက်သင့်လျော့်ဖြစ်ပါတယ်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 82X13, 1886KK, SY1246 ။
CPX1，CPX5，CPX12 : စက်ကိုအပ်ကို
Size: 12/80 ~ 18/110
Equivalent Systems: 135X9, SY1902, 29-C ကို-150, SY6960
machine: အလှဆင်ချုပ်စ​​က်, Handstitch စက်
ဒါဟာ Shanks 1 ဘက်မှာပြားဖြစ်တယ်, CPx12 အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူအုပ်စုတွင်စီစဉ်။
က Round ပွိုင့်ဘုံအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများနှင့်သိုးမွှေးထိုးသည့်ပစ္စည်းများချုပ်ကောင်း၏
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 135X9, SY1902, 29-C ကို-150, SY6960 ။
Point: R / spî
size: 25/200, 27/250
Equivalent Systems: 168; 228 R ကို
machine: Outsole Threading စက်
အဆိုပါဝိသေသလက်ဝဲဘက် groove ပတ်လည်မှတ်နှင့်ပါးလွှာအစုံပွိုင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ outsole Threading စက်အသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာအားကစားဖိနပ်နဲ့အားလပ်ဖိနပ်ကို (ခြေမကျီ), ဂုံ, Skating ရှူးဖိနပ်, လက်ကိုအိတ်နှင့်ဖြစ်ရပ်များသီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။
Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 168; 228 R ကို
size: 14/90, 16/100, 18/110
Equivalent Systems: 29-C ကို-151, 29-DHA, 151; SY7800
အဆိုပါဝိသေသလက်ဝဲဘက် groove နှင့် Hook ပွိုင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအလှဆင် snitch မူသည် ဖြစ်. , လက်ချုပ်စ​​က်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ဒါဟာဝတ်စုံ (အနောက်တိုင်းစတိုင်အဝတ်ကို), သားသမီးများရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ neckties (ဆက်ဆံမှု), ဘောင်းဘီပေါ်အလှဆင်သီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။
Equivalent စနစ်များထည့်သွင်း: 29-C ကို-151, 29-DHA, 151; SY7800 ။